Tattoos of Japan, ny vanim-potoana Edo | Ny fanaovana tatoazy
Tattoos avy any Japon, vanim-potoana Edo
Taorian'ny lahatsoratra voalohany an'ny irezumi, niavian'ny tatoazy any Japon, anio dia ho hitantsika ny fivoaran'ny zavakanto tatoazy tato amin'ity firenena ity tamin'ny vanim-potoana Edo, ahitana ny taona 1603 ka hatramin'ny 1868.
Ary izany tokoa Nandritra io vanim-potoana io, izay tamin'ny fiandohan'ny tontolon'ny tombokavatsa dia nitovy ny zava-drehetra, nisy zavatra tsy nampoizina nitranga izay nanova ny tantaran'ny tombokavatsa avy any Japon mandrakizay.
1 Ilay tantara nanova ny zava-drehetra
2 Bandy mahafinaritra be
Ilay tantara nanova ny zava-drehetra
Ary ity fanovana tatoazy any Japon ity dia tsy mihoatra ny ambany noho ny ... novela.
Zava-miafina ny filan'ny olombelona, ​​hoy i Michel Ende. Indraindray misy asan'ny foronina izay mamorona mpankafy legiona tena izy. Ny fahazoana tombokavatsa mifandraika amin'ny kolontsaina malaza dia tsy zavatra maoderina, voafetra ho an'ireo mpankafy an'i Harry Potter na lalao video.
Fa kosa, azontsika atao ny mametaka an'ireto taolam-paty sy tatoazy ireto farafaharatsiny 1805, raha iray amin'ireo fandikan-teny Japoney an'ny Suikoden (o Shui hu zhuan, amin'ny teny sinoa, ilay fiteny nanoratana ilay tantara tamin'ny voalohany).
Bandy mahafinaritra be
Tammeijiro Genshogo, iray amin'ireo mahery fo amin'ilay tantara.
Suikoden, iray amin'ireo tantara efatra lehibe amin'ny literatiora sinoa, milaza ny tantaran'ireo bandy 108 niady tamim-boninahitra sy tamin-kerim-po. Ny fanontana Japoney dia tonga niaraka tamin'ny fanoharana tsy mampino vita tamin'ny alika hazo (manaraka ny fomban-tany malaza ukiyo-e). Ao amin'ny sary, ireo bandy dia noravahan'ireo sary tigra, voninkazo ary dragona ny vatany.
Nanjary adala ny vahoaka noho ny fanarahan-dia, ary nanomboka nitaky tatoazy bebe kokoa amin'ny fomban'ny Suikoden. Ka ireo mpanakanto efa niavaka tamin'ny vatan-kazo dia nanomboka nanam-pahaizana manokana momba ny tatoazy ihany koa.
Ary toy izany no niainan'ny tombokavatsa avy any Japon ny fitomboan'ny herisetra amin'ny mpitafy, ary ny fanokananan'ireo mpanakanto. ny sary izay hitondra ity zavakanto ity amin'ny sehatra vaovao.
Manantena izahay fa tianao sy liana amin'ity lahatsoratra ity momba ny tatoazy any Japon. Lazao anay, fantatrao ve ny tantaran'ny tatoazy Japoney? Manana tatoazy amin'ity fomba ity ve ianao? Lazao anay izay tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tattoos avy any Japon, vanim-potoana Edo
Tatoazy labozia, fanangonana ohatra sy hevitra
Tatoazy misy fehezan-teny, teny mandrakizay eo amin'ny hoditrao